Fil d'actualités du 17/07/2019
17/07/2019 - 16:00 : CAN 2019:Ho tanterahina anio ny fihadiana izay laharana faha telo eo amin'ny fiadihana ny CAN izay hifadonan'ny Nigeria sy Tunisie.
17/07/2019 - 15:30 : FANDRIAMPAHALEMANA:mpianatra ho pôlisy maro avy ao Antsirabe no havoaka amin'ny Zoma ho avy izao.
17/07/2019 - 15:00 : TSY FANDRIAMPAHALEMANA:Tovolahy iray no hita faty tao Ambalakida faritra Belo Tsiribihina,
17/07/2019 - 14:30 : FAHATONGAVAN'i PAPA:Hraisin'ireo fiangonana katolika miisa 21 eto Antananarivo ny fampiantranona ireo vahiny .
17/07/2019 - 14:00 : LALAO NY NOSY:Anio tolak'andro no hiatrika ny lalao fitsapana farany ireo ekipa Barea izay anomana ny lalaon'ny Nosy izay atao atsy Maurice.
17/07/2019 - 11:30 : SAMBAVA:tafiakatra hatrany amin'ny 8 000 ariary ny litatra amin'ny vidin-tsolika noho ny tsy fahampian'ny tahiry.
17/07/2019 - 11:00 : LALANA ZAFY ALBERT:Ho tokanana amin'ny heriny anio ny lalana manoloana ny kianjan'Alarobia ka nomena ny anarana hoe lalana zafy Albert.
17/07/2019 - 10:30 : JIRAMA:Misy fahatapahana ny famatsiana RANO anio Alarobia 17 Jolay 2019 manomboka tamin'ny 09 ora maraina teo ka hatramin'ny 06 ora hariva eny amin'ny faritra: HOMI SOAVINANDRIANA- AMBODIMANGA BESARETY- AVARADOHA- AMBOHITRAKELY- AMPASAPITO- ANJANAHARY.
17/07/2019 - 10:00 : JHONNY CLEGG:Nody mandry teo amin'ny faha 66 taonany i Jhonny Clegg izay fantatry ny maro tamin'ny famorona-kira afrikanina "asimbonanga" izay natolony an'ny Atoa Nelson Mandela tamin'izany fotoana.
17/07/2019 - 09:30 : ANDRIM-PANJAKANA:Rtoa Christine Razanamahasoa no voafidy ho filohan'ny andrim-panjakana nandritra ny fivorihana izay nataon'ireo solombavambahoaka omaly.
Archive du 20180831
Itasy sy Bongolava Babony
Nitsidika ny faritra Bongolava sy Itasy ny kandida filoham-pirenena Marc Ravalomanana tamin’ity herinandro ity.
Andry Rajoelina Hotsaraina amin’ny 7 septambra
Hatreto dia tsy hita veroka ny tohin’ny fitoriana ny filohan’ny tetezamita teo aloha, Andry Rajoelina, napetrak’ilay Hetsi-bahoaka ho an’ny fanorenana ifotony nolavin’ny Fitsarana avo
Rivo Rakotovao Tsy ho filoham-pirenena velively …
Fito andro katroka anio ny fe-potoana farany omen`ny lalàmpanorenana an`i Hery Rajaonarimampianina hitondrany firenena. Araka ny voalazan`ny andininy faha-47
Biletà 300 000 mampiahiahy Hampandresena kandida iray…
Maro ireo zavatra tsy dia mazava amin’ny olom-pirenena sy ny mpanao politika hatramin’ireo kandida filoha momba ny fifidianana hatao ny 7 novambra 2018N Anisan’ireny ny filazan’ny CENI
Mahafaly Olivier Hamalifaty an-dRajao ?
Na dia nanambara ny praiminisitra teo aloha, Solonandrasana Mahafaly Olivier fa “tsy ho mpanohitra izao fanjakana izao velively ny tenany”
A.Rajoelina – H.Rajaonarimampianina Tsy fampitaha amin’i Marc Ravalomanana
Sokajiana ho kandida matanjaka ao anatin’izao fifidianana izao ireo mpitondra telo nifanesy, dia i Marc Ravalomanana, Andry Rajoelina, ary i Hery Rajaonarimampianina.
Eliana Bezaza Ain’ny toekarena ny fampianarana sy ny tontolo ambanivohitra
Tokony hahazo ny fianarana tandrify azy ny Malagasy rehetra ary ho lasa ambony mba ho tombontsoan’ny toekarena, hoy ny fanehoan-kevitry ny kandida filoham-pirenena atolotry ny antoko PSD, Eliana Bezaza.
Solo Norbert Andriamorasata Nitory an’i Andry Rajoelina
Tafapetraka eny amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana na ny HCC Ambohidahy ny taratasy fitorian’Atoa Solo Norbert Andriamorasata, iray amin’ireo kandida filoham-pirenena natolotry ny antoko UDECMA/KMTP.
Rakotomamonjy Jean Max « Tsy handany andro amin’ny fitsapatsapana aho ! »
Miteraka resabe amin’izao fotoana ny fametraham-pialan’ny filohan’ny Antenimieram-pirenena, Rakotomamonjy Jean Max, izay kandida ho filoham-pirenena ihany koa.
Fisorohana ny herisetram-pifidianana Hobeazina ny mpifidy
Hofanina hatrany ireo mpampiofana izay hisahana ny resaka fanabeazana ara-pifidianana eto amintsika manerana ny Nosy, hoy ry zareo avy eo anivon’ny CENI na ny Vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana.
Kandida tsy nahafeno dosie Midongy eny amin’ny HCC
Araka ny efa nolazain’izy ireo dia nahatonga solontena nanatitra fangatahana teny amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana na HCC tokoa omaly ireo kandida miisa 10 nolavina ny dosieny tsy nahafeno fepetra maha kandida ho filoham-pirenena.
MPONINA ETSY LA REUNION KELY Tsy mila mpanao politika mitady seza
Tsy hanaiky horebireben’ireo mpanao politika mitady seza intsony ireo mponina etsy La Réunion Kely.
Mila vaniny indray
O ry Jean a ! Tsy efa mba maharikoriko anareo ve hoe : zato amby arivo ny isan’ilay kandida e ? Izay efa nailika dia mbola midongy ihany.
Kaominina Ivato Napetraka ny trano fitehirizam-bola
Notokanana tamin’ny fomba ofisialy omaly alakamisy 30 aogositra ny trano fitehirizam-bola vaovaon’ny minisiteran’ny asam-panjakana sy ny kaominina eny Ivato.
Ecole de Foot-ball Academica Nankasitraka an’ny Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana
Tonga nitondra fisaorana ho an’ny Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana tetsy amin’ny Lapan’ny tanàna Analakely omaly alakamisy 30 septambra ireo ankizy mpianatra,
Rugby faha-15 taonan’ny Tambohobe Omby roa no loka be hiandry etsy Mahamasina
Ho famaranana ny lalao rugby nentina nankalazana ny faha-15 taona niorenan’ny fikambanana Tambohobe miady amin’ny herisetra dia omby roa sy loka lehibe iray no hatolotra ho an’ireo mpandresy etsy amin’ny kianjan’i Mahamasina
Basikety « Critérium national U12 » Nosokafana ofisialy omaly tetsy Mahamasina
Tetsy amin’ny kianja ivelany ao amin’ny Lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina omaly alakamisy 30 aogositra no nanokafan’ny talen’ny
Basikety U14 zazavavin’Amoron’i Mania Afaka hiatrika ny BEPC any Manandriana
Tafaverina soa amantsara any Ambatomarina Manandriana fiaviany ireo mpilalao basikety sokajy U 14 zazavavy solontenan’ny Faritra Amoron’i Mania rehefa avy niatrika ny fiadiana ny ho tompondaka nasionaly U 14 tany Nosy-Be Hell-Ville ny 18-26 aogositra 2018 lasa teo.
Manambana an’i Madagasikara hatrany ny loza ateraky ny savorovoro politika efa ho lava.
CEPE - Adina manokana 2018 Hivoaka amin’ity faran’ny herinandro ity ny vokatra
Tsy haharitra ela fa amin’ity faran’ny herinandro ity ihany dia hivoaka amim-pomba ofisialy ny voka-panadinana CEPE adina manokana na “session spéciale 2018” notanterahina tany amin’ireo foibem-panadinana miisa 15 tsy nahavita izany ny aalata 28 aogositra teo.
SAMPANA VONJY TAITRA BEFELATANANA Tsy afaka mandray marary mandritra ny herinandro
Tsy afaka mandray marary ny sampana vonjy taitra etsy amin’ny hopitaly Befelatanana nanomboka omaly alakamisy.
Orinasa Chicky Nomen’ny Miarakap 400 tapitrisa Ariary
Dimy volana taorian’ny fampahafantarana tamin’ny fomba ofisialy ny Miarakap dia nisy tamin’ireo orinasa kely vao manomboka sy teraka ireo (Startup) no nahazo famatsiam-bola sy fanohanana sahady.
Vono olona Nosamborina i Dadafara
Andro vitsy taorian’ny fanafihana mitam-piadiana nahafatesana olona roa niseho tao Ambalavola-Mahajanga ny zoma lasa teo, saron’ny polisy i Dadafara,
Valy bontana no nataon’ny Ministeran’ny fitatanam-bola sy teti-bola manoloana ny grevin’ny fadin-tseranana.
Fiovaovan’ny toetr’andro Mamparefo ny fahasalaman’ny zokiolona
Miovaova be ihany ny toetr’andro eto amintsika. Mangatsiaka ny maraina, mihamafana amin’ny antoandro ary migaingaina mila tsy ho zaka mihitsy indraindray.
Fampiroboroboana ny fizahantany Ilaina ny fanarahana ny fenitra iraisam-pirenena
Nisy omaly ny fifanaovan-tsonia fiaraha-miasa sy ny famaranana ny atrikasa nataon’ny minisiteran’ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak’asa ary ny fikambanana CS2PCTHR.
Harena ankibon’ny tany Maro ireo orinasa mpitrandraka tsy ahazoam-baovao
Omaly alakamisy 30 aogositra no navoaka ny tatitra miompana amin’ny harena ankibon’ny tany fanaon’ny ITIE (Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives) isan-taona.